Paladoken နှင်းလျှောစီးစင်တာကိုအီရန်ခရီးသွားများ | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီအရှေ့ Anatolia ဒေသကြီး25 ErzurumPaladoken နှင်းလျှောစီး Center ကအီရန်ခရီးသွားဧည့်တစ်ဦးလူအစုအဝေးမဲပေးသူကိုမြင်လျှင်
22 / 03 / 2014 Levent Ozen 25 Erzurum, အရှေ့ Anatolia ဒေသကြီး, PHOTOS, အထွေထွေ, TELPHER Paladoken နှင်းလျှောစီးစင်တာအီရန်နိုင်ငံခရီးသွားဧည့်တစ်ဦးလူအစုအဝေးမဲပေးသူကိုမြင်လျှင် yorumlar kapalı
Paladoken နှင်းလျှောစီး Center ကအီရန်ခရီးသွားဧည့်တစ်ဦးလူအစုအဝေးမဲပေးသူကိုမြင်လျှင်: အီရန်ခရီးသွားဧည့် 14 မှစုပြုံ Nowruz ဟိုတယ်ထေိုနှုန်းထားများခံရသောနေ့အဘို့ Paladoken နှင်းလျှောစီးအားလပ်ရက် 100 ရာခိုင်နှုန်းကိုရောက်ရှိရ။ အဆိုပါဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲမှု, အ Newroz အီရန်ခရီးသွားများကြောင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအထူးဖျော်ဖြေရေးနှင့်လှုပ်ရှားမှုများကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့သည်။ အီရန်ခရီးသွားဧည့်မတ်လ 21 ၏ညဥ့်ကောင်းစွာမီးကိုကျော်ခုန်ဖို့ရည်ရွယ်ထားစောင့်ရှောက်လျှင်, လူငယ်တွေအများစုသောနေ့ရက်ကာလကိုနှင်းလျှောစီးစဉ်အတွင်းလုပ်ခဲ့တယ်ဖွဲ့စည်းထားသောနှင်းလျှောစီးတောင်စောင်းပေါ် Nowruz မီးရှို့ကြ၏။
အီရန်၏အရှေ့အဇာဘိုင်ဂျန်ပြည်နယ်မှလာမယ့် 500 ခရီးသွားဧည့်အကြောင်းကိုPalandöken, Nevruz အလွန်စိတ်အားထက်သန်နှင့်အတူကျင်းပခဲ့သည်။ နေ့ခင်းဘက်နှင်းလျှောစီးအတွက်စေ့စပ်အီရန်ခရီးသွားဧည့်လောကဓာတ်လုံးကိုငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုရောက်စေဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေ့ရှိခဲ့ nevruzun မီးကိုကျော်ခုန်ညဉ့်အခါမှာအစောပိုင်းနံနက်အလင်းသည်အထိဒစ္စကိုအတွက်ပျော်စရာရှိခြင်း။ သူတို့တူရကီအတွက်အီရန်နိုင်ငံသားPalandökenနှင်းလျှောစီး Center ကဖော်ပြသို့ရောက်လာသော Nevruz အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများဆင်နွှဲနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပြုလုပ် Erzurum အတွက်နွေဦး၏ရောက်ရှိသည့်အရည်ပျော်အမြတ်ရှိနေသော်လည်းဝမ်းမြောက်စေပြီးဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
တူရကီရဲ့ပရဒိသု Fulai Leyla အီရန်, "နွေရာသီမှာတော့ကျနော်တို့ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလPalandökenအတွက် Antalya ခြင်းငှါလာကြတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အမျိုးမျိုးဖြစ်သကဲ့သို့ယခုနှစ်တွင်ငါ့မိသားစုနှင့်အတူ Erzurum သို့ရောက်ကြ၏။ Palandökenအီရန်နိုင်ငံသားအခြားခရီးသွားများမရှိခြင်းများအတွက်သူစိမ်းအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုမြင်တတ်ကြဘူး "ဟု၎င်းကပြောသည်။
သောPalandöken 200 turizmci ဟာမစ်Çarkçıအီရန်နိုင်ငံသားများနှင့် ပတ်သက်. ဆောင် ခဲ့. , ကျွန်ုပ်တို့အီရန်အတွက်Palandökenစားသောက်ရန်ပိုနှစ်သက် "Nowruz အကြီးမားဆုံးအကြောင်းရင်းတူရကီရန်အလွန်နီးစပ်သည်။ ဒါဟာအစမတ်လထဲမှာစကီးရာသီနေဆဲဖြစ်သည်။ Nevruz ညဥ့်ရာစုနှစ်၏အရေးအပါဆုံးသင်္ကေတ "S '' ကျွန်တော်အနီရောင်ငါးထားအဖြစ်နှစ်သစ်တစ်လျှောက်လုံးသာယာဝနှင့်ကောင်းမွန်သောကံဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်ယုံကြည်သောအက္ခရာ '' Haft သိန် '' ကျနော်တို့ကစားပွဲပေါ်မှာဆောကျနှငျ့အတူ7အစားအစာ စတင်. နှင့်အတူအီရန်အတွက်ပှဲကျင်းပဖြစ်ပါတယ်" ဟုသူကပြောသည်။
အီရန်ခရီးသွားဧည့်ရူ့ဒါဟာ Palandoken မြို့တော်ရဲ့စီးပွားရေးကိုဖြည်သောအီရန်နိုင်ငံသားအထောက်အကူပြုဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်အဆိုပါ Dedeman ဟိုတယ်အထွေထွေမန်နေဂျာ Mehmet Varol က "မတ်လကုန်မှာPalandökenထောက်ပြသည်။ မြို့လယ်အီရန်နိုင်ငံသားအတွက်တိုင်းသုံးကားများထဲကတစ်ခုမှာ။ ညအချိန်တွင် Nowruz အားလပ်ရက်နှလုံးပေါ်မှာအီရန်နိုင်ငံသားသူတို့နေ့ကနှင်းလျှောစီးလုပ်နေတာပျော်စရာရှိသည်မဟုတ်လျှင်။ ရာသီဧပြီလကုန်အထိဆက်လက်တော်မူမည် ကျနော်တို့ဟုသူကပြောသည် doyamany "နှင်းလျှောစီးတဲ့သူတွေကိုမျှော်လင့်ထား။
တရုတ်ထံမှအီရန်ရထားလမ်းနှင့်အတူ 1.5 ဒေါ်လာဘီလီယံသဘောတူညီချက်
Topbaş: Sultanbeyli မြေအောက်ရထားလိုင်းကိုအဆိုပါ 2019 ရပါလိမ့်မယ်